नेवार महिलाहरुले तीज किन मनाउदैनन ?
कोशी अनलाइन सोमबार, १६ भदौ, २०७६ मा प्रकाशित
आज सोमबार देशभर हिन्दु नारीहरु हर्षोल्लासले हरितालिका तीज मनाइरहेका छन । आआफनो गच्छे अनुसारको हिजो साँझ र राती मिठो मसिनो दर खाएर आज भने महिलाहरु पानी समेत नखाइ दिनभर कठोर ब्रस्त बसिरहेका छन । रातो सारी , चुरा र पोतेमा सजिएका महिलाहरु शिवालय , चौतारा र बिभिन्न स्थानहरुमा भेला भएर पिडा व्यवथा गाएर मनोरञ्जनगर्दै तीज मनाइरहेका छन । तर हिन्दु धर्म मान्ने नेपालको नेवार समुदायका महिलाहरु भने तीज पर्व मनाउदैनन । किन मनाउदैनन त नेवार समुदायका महिलाहरुले तीज ?
हिन्दू धर्मका ग्रन्थमा उल्लेख गरिए अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने वचन पार्वतीलाई मन नपरे पछि आफूले मन पराएको वर अर्थात् भगवान शिव पाउन जङ्गल गएर शिवजीको तपस्या गर्न थालिन् । पार्वतीले तपस्या गरेको एक सय वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आफूले गरेको तपस्याको फल नपाउँदा एकदिन नदि किनारमा बालुवाको शिव लिङ्गको स्थापना गरी केहि नखाई, पानी पनि नपिईकन निराहार व्रत बस्न थालिन् ।
यसरि पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी उनीसंग प्रसन्न भएर उनको अगाडी प्रकट भई पार्वती संग वर माग भन्दा उनले ुमैले हजुरलाई साँचो मनले पतिका रूपमा वरण गरिसकेको हुनाले यदि तपाई साँच्चै नै मेरो तपस्याबाट प्रसन्न भई प्रकट हुनुभएको हो भने मलाई आफ्नी अर्धाङ्गिनीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् भनेर बताइन् । शिवले ‘चिताएको कुरा पुगोस्’ भनी आशिर्वाद दिएपछि शिव पार्वतीको विवाह भएको थियो । पार्वतीको ब्रत सफल भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन परेको थियो । सोही तिथी देखि हिन्दू नारीहरूले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाले र यस दिनलाई तीजको रूपमा मनाउने चलन पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मानिने गरिन्छ ।
जनकमान डंगोलका अनुसार नेवार समुदायका केटी अर्थात बालिकाहरुको जीवनकालमा तीन पल्ट विवाह हुन्छ । पहिलो इहिं मचा, जस्मा उनीहरुको बेलसँग विवाह गरिन्छ । नेवार जातिमा बालिकाहरुलाई रजश्वला नभईकन बेलसँग विवाह गरिदिने परम्परा रहेको छ । जसलाई बेल विवाह भनेर चिनिने गरिन्छ । बेल विवाह गर्ने बालिका दिनभरी व्रत बसेर बेल लगायत कलश, बज्र, चक्र आदिको पूजाआजा गर्दछन् । विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी विवाह गर्ने बालिकाका बुवाले कन्यादान दिएपछि पहिलो बेल संगको विवाह सम्पन्न हुने गर्दछ ।
नेवार जातिमा बेल जस्तो भयो दुलहीको वर पनि उस्तै हुने विश्वास रहेको हुन्छ र बेल फुटेमा अनर्थ हुने भएका ले केहि समय पश्चात बेललाई भगवान कहाँ वा खोलामा लगेर चढाउने गरिन्छ । दोस्रो नेवारी भाषामा बारा तयेगु अर्थात् नेपालीमा गुफा राख्ने जस्लाई सूर्यदर्शन पनि भन्ने गरिन्छ । बेलसँग विवाह भएपछि विजोर वर्षमा बाह्र दिनसम्म गुफामा राखेपछि सूर्यको दर्शन गराइन्छ । सूर्यदर्शनमा बालिकाहरुको विवाह सूर्यसँग गरिन्छ । केटीहरुको पहिलो रजस्वलाको समयमा वा रजस्वला सुरु हुनु भन्दा अगाडी नै सूर्यदर्शन गरिन्छ ।
सूर्यदर्शन गरिएका बालिकाहरुलाई खराब मान्छेहरु तथा नकारात्मक शक्तिबाट सूर्यले बचाउँछ भन्ने विश्वास रहेको पाइन्छ । वयस्क भएपछि तेस्रो र अन्तिम विवाह चाही केटा अर्थात् लोग्ने मान्छे सँग गरिन्छ । सनातन हिन्दू धर्म नै भएतापनी नेवार समुदायका महीलाहरुले तिजको समयमा व्रत बस्नु पर्दैन अथवा तीजमा ब्रत बस्ने परम्परा छैन । नेवार समुदायका सनातनी कन्याहरुको बाल्य अवस्थामा नै भगवानसंग बैदिक तन्त्र निर्देशन अनुसार बेलविवाह सम्पन्न भइसकेको हुनाले उनीहरु कहिले पनि बिधवा नहुने शास्त्रीय मान्यता पाएको हुन्छ ।
तीजको व्रत लिई नेवार महीलाहरुले पुन सौभाग्यका लागि वा व्रत बसेर राम्रो पतिको कामना गर्नु पर्ने आवश्यक्ता धर्मशास्त्रले देखाएको छैन । सनातन काल देखि नै हिन्दू धर्म मान्दै आएपनि नेवार महीलाहरुले तीजमा व्रत लिने गर्दैनन् । आजकाल केही नेवार महीलाहरुले अरुहरुको देखासिकी गर्दै तथा समय र आफुले बसेको ठाउँको अनुसार तिजको ब्रत बस्न थालेको देख्न सकिन्छ । नेवार परम्परा,संस्कृत र धर्म संस्कार बिपरित भए पनि रहरले यो व्रत बसेको हुन भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि बोल्ने कुरा हुदैन ।
३० मजदुर परिवारलाई खाद्यान्य सहयोग
अश्लिल भिडियो बनाएर ‘ब्लाकमेलिङ’, पूर्व प्रहरीसहित दुईजना पक्राउ
विराटनगरमा लुटपाट गरेको आरोपमा चारजना पक्राउ
सरकारले आफ्नै खर्चमा विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने
विराटनगरमा तीनसहित प्रदेश १ मा थप ३३ जनामा काेराेना संक्रमण
बार्सिलोना भर्सेस ओसासुना : खेल जित्दै रियलको हारको कामनामा बार्सिलोना